प्रबिधि - मेरो खबर -
काठमाडौँ, ८ वैशाख । नेपाल टेलिकमले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाको तुलनामा आफूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, गुणस्तरीय सेवा दिन र ग्राहकमाझ लोकप्रिय बनाउन सुधारका मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत टेलिकमले आव २०७३÷७४ मा पहिलो चरणमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ‘फोर जी’ सेवा र अन्य स्थानमा ‘थ्री जी’ सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । यसैगरी, ग्राहक वर्गले सिमकार्ड किनेको तथा फोन सम्पर्क गरेको आधारमा जम्मा हुन आउने रकम कुनै परियोजनामा लगानी गरेर सेयर वितरणसमेत गर्नसक्ने योजना ल्याउने तयारीमा टेलिकम रहेको आज कार्यालयमा आयोजित...
काठमाडौँ, ११ चैत । नयाँ बन्ने घरमा सौर्य बत्ती जडान गर्न प्रोत्साहन गरिएपनि सो कार्यले गति लिन सकेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकामा नक्सा पास गर्ने निवेदन नै कम परेकाले सौर्य बत्ती जडान पनि प्रभावित भएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी विकास विभाग प्रमुख तथा इञ्जिनिएर राम थापाका अनुसार ऊर्जा सङ्कट टार्न सो नियम ल्याइएपनि हाल यस किसिमले घर निर्माण गर्नका लागि निवेदन आएका छैनन् । तीन महिना अघि सरकारले नयाँ निर्माण हुने घरका लागि सौर्य बत्ती जडान गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । थापाले सरकारले उक्त नियम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्यालय, अस्पताल,...
इलाम, १० चैत । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरधुरी सर्वेक्षणको गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडाका दुईदेखि तीनजना स्वयम्सेवकलाई प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिएर घरधुरी सर्वेक्षणमा पठाउन लागेको छ । ‘स्मार्ट फोन’को प्रयोग गर्ने युवालाई तालिम दिएर यही सातादेखि सर्वेक्षणमा पठाउन लागिएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सर्वेक्षणमा भाडामा लगाइएको घर, सवारीसाधन लगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दा तथ्याङ्क सङ्कलकहरू प्रत्येक घरमा पुगेर आफ्नो मोबाइलमा भएको...
काठमाडाँ, ५ चैत । काठमाडौँको रत्नपार्कमा आजदेखि वाइफाइ सेवा सुरु भएको छ । रु २५ तिरेर रत्नपार्कभित्र छिर्ने छात्रछात्राले वाइफाइ प्रयोग गर्नसक्ने काठमाडाँ महानगरपालिकाले जनाएको छ । दुई मेगावाट क्षमता भएको छ वटा इन्टरनेट प्वाइन्टबाट उपलब्ध हुने वाइफाइ सेवा एकैपटक २४० विद्यार्थीले उपभोग गर्न सक्नेछन् । सो वाइफाइको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले काठमाडाँ उपत्यकालाई नै वाइफाइ जोनका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सूचना र प्रविधिको विकासले विश्वलाई नै गाउँमा परिणत गरेका बेला नेपालले प्रविधिको...
काठमाडौँ, १० फागुन । दमौलीका १७ वर्षीय विकल्प ढुङ्गानाले दुई वर्ष लगाएर सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने स्कुटरको निर्माण गरेका छन् । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सोलार जडित स्कुटर सार्वजनिक गरिएको हो । अनुसन्धानकर्ताले आफ्नी आमाको नामबाट स्कुटरको नाम ‘विष्णु सोलार स्कुटर’ राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूले नयाँ काम गर्न चाहेको तर राज्यले सहज वातावरण नबनाएको भनी गुनासो पनि गर्नुभयो । सो अवसरमा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिवलाल थापाले स्कुटरको शुभारम्भ गर्दै भविष्यमा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा लाग्न सके नाकाबन्दीको मुकाबिला समेत गर्न सकिने र...
Scientists are claimingastunning discovery in their quest to fully understand gravity. They have observed the warping of space-time generated by the collision of two black holes more thanabillion light-years from Earth................................................... This news is from www.bbc.com/news. So please click here to see the full description ...
काँकडभिट्टा (झापा), २७ माघ । झापामा पहिलोपल्ट सूचना प्रविधिसम्बन्धी मेला ‘क्यान इन्फोटेक–२०१६’को आयोजना हुने भएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घले आयोजना गर्ने सो मेला आगामी फागुन २१ देखि २५ गतेसम्म विर्तामोडको कन्काई क्याम्पस परिसरमा हुनेछ । सूचना प्रविधिमा भइरहेको विकास र भित्रिएका नौला प्रविधियुक्त उपकरणको मेलामा प्रदर्शनी हुने महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवम् मेला संयोजक दिपेश पाठकले जानकारी दिनुभयो । मेलामा फ्री वाइफाइ सुविधासहितका ७२ वटा बिक्री तथा प्रदर्शनी कक्ष रहने मेला करिब एक लाखले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको महासङ्घ...
काठमाडौँ, २० माघ । कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल महासङ्घको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भएको ‘क्यान इन्फोटेक’ मा तीन लाख ६३ हजारले अवलोकन गरेका छन् । ‘क्यान इन्फोटेक’ मेला यही माघ १५ गतेदेखि सुरु भएको थियो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधि र सामग्रीका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको महासङ्घले जनाएको छ । मेला आज सम्पन्न भएको हो । आज अन्तिम दिन मात्रै ५२ हजार ४११ जनाले मेलाको अवलोकन गरे । कुल ३ लाख ६३ हजार ४५६ जनाले मेला अवलोकन गरेको महासङ्घका तृतीय उपाध्यक्ष रोमकान्त पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । मेलाको अन्तिम दिन...
टेलिभिजन पड्केर बालिकाको मृत्यु
दोलखा, ११ मङ्सिर । आज साँझ ५ बजे घरमा टेलिभिजन हेरिरहेका अवस्थामा अचानक टेलिभिजन पड्कँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–७ स्थित सार्कीस्वाँराटोलमा बाबु र छोरीले टिभी हेरिरहेका अवस्थामा एक्कासि टेलिभिजन पड्कँदा दुई वर्षीया रेष्मा चौलागार्इंको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विनोदकुमार सुनुवारले बताउनुभयो । सामान्य घाइते रहनुभएका बाबु रामकृष्ण चौलागार्इंको चरिकोटस्थित च्छोरोल्पा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उहाँको आँखामा चोट लागेको छ । रासस ...
नेपालमा हावाबाट चल्ने रिक्सा बन्यो
पथरी (मोरङ), ३० कात्तिक । मोरङका विद्यार्थीले हावाबाट चल्ने रिक्सा बनाएका छन् । इन्धनको अभाव भइरहेको बेला इन्धनबिनाको यात्रा सहज बनाउन विद्यार्थीले तीन चक्के रिक्साको सफल परीक्षण गरेका छन् । हात्तीमुढास्थित मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निकका मेकानिकल समूहका पाँचाँै ब्याजका विद्यार्थीले हावाबाट चल्ने तीन चक्के रिक्साको सफल परीक्षण गरेका हुन् । नेपालमै पहिलो पटक तयार गरिएको रिक्सामा चार स्टोक पेट्रोल इन्जिनलाई मोडिफाइ गरेर हावाको चापबाट चल्ने बनाइएको विद्यार्थी चक्रप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “डिजेल र पेट्रोलबिना नै हावाको चापले चल्छ...
काठमाडौँ, ३० कात्तिक । नेपाल बैंकको सहकार्यमा नेपालमा पहिलोपटक साझा यातायातले यात्रुलाई पैसाको सट्टा स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट भाडा तिर्ने प्रविधिको परीक्षण थालनी गरेको छ । साझा यातायातको कार्यालय पुल्चोकमा आज आयोजित कार्यक्रममा स्मार्ट यात्रा कार्डको परीक्षणको सुरुवात गरिएको हो । कार्ड परीक्षणको सुरुवात् गर्दै यातायातका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले यातायात क्षेत्रमा नवीन प्रविधिको सुरुवात् गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रपताप शाह र भारतीय नुस्पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...